Ramsey oo rumeysan in macalin Wenger sii joogi doono Arsenal. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Ramsey oo rumeysan in macalin Wenger sii joogi doono Arsenal.
Ramsey oo rumeysan in macalin Wenger sii joogi doono Arsenal.
Posted by: radio himilo May 28, 2017
Muqdisho – Aaron Ramsey ayaa sheegay in macalin Arsene Wenger uu kusii nagaan doono kooxda kadib guushii ay Wembley kaga hantiyeen dhiggooda Chelsea oo ay 2-1 ku sul-daareen.
Ramsey ayaa goolkii guusha ku dhaliyay madaxa kagadaal laad uu ka helay Giroud si macalin Wenger uu ugu suura-galiyo markii toddobaad inuu kooxda la qaado koobka FA Cup-ka iyo in sidoo kale kooxdu xaqiiqsato rikoor dhan 13 jeer oo hanashadiisa ah ay ka dhigto tartamada FA Cup-ka.
Laacibka Wales ayaa amaanay shaxdii uu Wenger kusoo geliyay garoonka – iyaga oo dhamaan lixdii kulan ee ugu danbeysay guuleysanayay.
Mustaqbalka macalin Wenger ee gegida Emirates ayaa wali heegada ku shareeran iyada oo heshiiskiisuna uu ku dhow yahay heer gabagabo ah, hayeeshe Ramsey ayaa rajeynaya in 67-jirkan lala geli doono heshiis cusub.
“Dabcan waxay ila tahay inuu sii joogi doono,” Ramsey ayaa u sheegay BBC Sport. “Wuxuu fariid u yahay aniga iyo ciyaartoyda kale.”
“Waxaynu badalnay jihada, waxa aanna ku helnay guulo, waxay ila tahay in xagaaga xigana uu nala qaadan doono. Waana dalbaneyna inuu nala sii joogo.”
Ramsey ayaa sidoo kale shabaqa ku hubsaday goolkii guusha FA Cup-kii ay kaga guuleysteen Hull City sanadkii 2014, wuxuuna ku adkeysanayaa in xilli-ciyaareedka sanadkan ee kooxda aan loo dhayalsan si liidata maadaama xittaa markii ugu horreysay ay lumiyeen kamid noqoshada tartanka Champion League muddo 20 sano ku dhow.
“Ma qeexi karo xaqiiqadeeda,” ayuu yiri. “Waxay aheyd sanad gebi-dhacleyn leh, hayeeshe waxaan ku dhameysannay guul maadaama aan FA Cup-ka hantinnay.”
“Waan jeclahay tartankan iyo ku ciyaarista halkan, Waxaan u dheelnay si fiican waana u qalannay guusha.”
Previous: Costa: “Waxaan aadayaa Spain ama ku sugnaanayaa Chelsea.”
Next: Ronaldo oo qirtay jaceylka uu Messi u hayo – hayeeshe u filaya samigiisa biladda Ballon d’Or.